Maraykanka, 31 October 2018
Mareykanka oo ka walaacsan heshiiska labada Kuuriya
Waxaa sii kordhaya kala duwanaansho fikir oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo salka ku haya heshiis milatari oo labada Kuuriya ay qorsheynayaan.
Pompeo: Sacuudiga waxaa ka go'an la xisaabtan
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in markii uu la kulmay hogaamiyayaasha Sacuudiga aysan dooneyn inay ka hadlaan dhammaan xaqiiqooyinka ku hareereysan maqnaanshaha suxufiga reer Sacuudi ee fadhigiisu ahaa Mareykanka.
Trump oo difaacay Sacuudi Carabiya
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaliilay eedeynta soo kordheysa ee loo jeedinayo dalka Sacuudi Carabiya ee ku aaddan wariyihii la waayey ee Jamal Khashoggi.
Minnesota: Meydka gabdho Soomaali ah oo la helay
Ciidamada booliska ee magaalada Cheska ee gobolka Minnesota ayaa xaqiijiyay dhimashada laba gabdhood oo Soomaali ah oo la la’aa tan iyo aroortii hore ee Sabtida.
Turkey: Andrew Brunson oo lasii daayey
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa wadaad diinta kirishtanka faafiya oo Mareykan ah ku heshay dambi argagixisanimo, hase yeeshee xukuntay in labadii sano ee uu xabsiga ku jiray ay la macno tahay inuu waqtigiisa qaatay oo uu dalka ka bixio karo.